4-3: Andreas Christensen, David Luiz vs Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette
Laba dagaal oo isa saaran ayaa dhex mari doona labada difaac dhexe ee kooxda Chelsea oo noqon doona Andreas Christensen iyo David Luiz maadaama oo uu Antonio Rudiger dhaawac ku seegayo iyo labada gool dhaliye ee Arsenal soo waday ee Aubameyang iyo Lacazette.
Unai Emery ayaa shaxdiisa ku soo wada bilaabi doona Aubameyang iyo Lacazette oo 13 gool oo Europa League ah soo wada dhaliyay isla amrkaana 5 gool caawin soo sameeyay, waana imtixaanka ugu adag ee ay Chelsea la kulmi doonto.
Aubameyang iyo Lacazette waxay si toos ah uga hor iman doonaan Andreas Christensen iyo David Luiz oo wadnaha difaaca dhexe ee Chelsea ku soo wada bilaabi doona waana goobta ugu muhiimsan ee ay Arsenal ciyaarta ugu guulaysan karto hadda lagu jabiyo Andreas Christensen iyo David Luiz.
Andreas Christensen ayaa shaqo fiican soo qabtay iyada oo Blues laga soo dhaliyay 9 gool oo kaliya 14 kii kulan ee uu Europa League xili ciyaareedkan ugu soo bilawday waxaana ka garab ciyaari doona David Luiz oo ay xili ciyaareedkan soo xifiltameen Aubameyang.
Dagaalka dhex mari doona Aubameyang iyo Lacazette iyo difaaca Chelsea ee Andreas Christensen iyo David Luiz ayaa noqon doona laba goob dagaal oo ay guulaysan doonto kooxda ay ciiidankeedu gacanta sare yeeshaan.
2- Mateo Kovacic v Lucas Torreira
Chelsea waxay ugu dhawaan ogtahay in Kante aanu taam u ahayn finalka UEFA Europa League ee ay Arsenal la ciyaarayaan waxaynta taasi keenaysaa in Sarri uu shaxdiisa khadka dhexe ugu soo bilaabi doono Kovacic, Ross Barkley iyo Jorginho.
Mateo Kovacic oo ciyaari kara kulankiisii ugu danbeeyay ee Chelsea maadama oo uu heshiiskiisa amaahda ahi dhamaad yahay ayaa samayn doona wax walba oo uu koobka Europa League ugula guulaysanayo kooxda uu amaahda ku soo joogay ee Blues.
Laakiin Arsenal waxaa xidigaha khadka dhexe ugu jiri doona ka mid ah dagaal yahanka reer Uruguay ee Lucas Torreira kaas oo xili ciyaareedkan soo muujiyay in uu yahay halbawlaha isku xidha Gunners ee ayna la’aantii socon karin.
Meelaha ay Arsenal ugu guulaysan karto waxaa ka mid ah khadka dhexe haddii sida la filayo in uu Kante ka maqnaado Chelsea iyada oo Lucas Torreira uu noqon doonto xudunta dagaalka Gunners ee bara-bixin kara Kovacic iyo asxaabtiisa
Qaab ciyaareedka ay kala soo muuqdaan Kovacic iyo Lucas Torreira iyo midkooda ku guulaysta dagaalka khadka dhexe ayaa sabab u noqon doonta kooxda guushu raaaci karto finalka Europa League.